Myanmar Youth Media Club - MYMC Wall
ဒီနေရာမှာ MYMC Team တစ်ခုလုံးအတွက် message ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ အရင် MYMC version 2.0 က shoutbox အတွက် အစားထိုးတစ်ခုပါ။ MYMC အတွက်အကြံဥာဏ်ပေးချင်လား၊ idea အသစ်တွေ share လုပ်ချင်လား၊ ရှိပြီးသား အစီအစဉ်တွေကို ဝေဖန်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် MYMC ကို ဘာကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း ပြောမလား ကြိုက်ရာ message ဒီမှာ ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Wall က message တွေကိုဘယ်တော့မှ ဖျက်ပစ်မှာမဟုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်မဲ့ message များ post မလုပ်ဖို့ ကြိုတင် မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
- MYMC TeamSaw Lay !_!Follow your dream !Thursday, 06 June 2013adminLinn-ChitThu hey there sorry about the late respond. You should be able to listen from our direct links which are radio.mymclub.net, mobileradio.mymclub.net , You can either copy and paste these links in any browsers and it should automatically open if you have windows media installed on your computer.Saturday, 06 April 2013Linn-ChitThuAnyway to listen radio online stream from PC? I can listen to playlists but not the radio. Any idea?
I also tried to chat Cbox but I couldn't type anywords even after registered.
ThanksTuesday, 02 April 2013Ye HeineJackie Chan & Kim Hee Sun - The Myth Theme Song "Endless Love" ကိုကော်ပီထားတဲ့မြန်မာဟစ်ဟော့ အဆွေးသီချင်းပြန်နားထောင်ချင်လို့ပါ။ နာမည်မမှတ်မိတော့ဘူး တော်တော်လေးတော့ကြာပြီအဲသီချင်းက။Friday, 04 January 2013Nay L Maungအဆိုရှင် မိစန္ဒိ
သီချင်း အမည် ရေခဲ ရိုက် အပြုံး ရဲ့ မူရင်း အဆိုရှင် နှင့် သီချင်း အမည် သိချင်ပါတယ်။ ပြန်လည် ဖော်ပြပေး စေလို ပါတယ်။Monday, 24 December 2012Ma Khaingမောင် သီချင်းများလဲ စုစည်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကျေားဇူးတင်ပါတယ်Sunday, 23 December 2012Michael Where i can fine Myanmar soungs Guitar NoteMonday, 10 December 2012linda021This is suchagreat blog post! Appreciating the hard work you put into your site. It’s awesome blog.Saturday, 08 September 2012deloisbollackerHello. And Bye.Wednesday, 22 August 2012ကြယ်စင်ထွန်းတောက်အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်လေးဘဲ...နည်းပညာတွေးဖွံ့ဖြိုးတဲ့အချိန်မှာ ပြည်ပနဲ့ ပြည်တွင်းက ကိုယ့်မြန်မာတွေ နည်းပညာဖြန့်ဝေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်... ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ အချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်...Wednesday, 04 July 2012SuperFor You2playlist is not working.Thursday, 14 June 2012yunaa yamasin pyay payam kyite par tel~Sunday, 06 May 2012dEaTh note0973105773Tuesday, 01 May 2012Voteဒီလိုပါ. MYM.. မြန်မာပြည်မှာ သီချင်းတွေအတွက် အားကိုးလောက်စရာ MUSIC CHART မရှိပါဘူး။။ billboard တို့ လိုမျိုးလေ။ အဲဒါ MYM ကနေပြီးတော. chart လေး ၁ခု လောက်လုပ် ကြည့်ပါလား။ ... facebook နဲ့ website လာတဲ့သူတွေကို vote လုပ်ခိုင်း ပေါ.။။။ ... plx think about my advice... peace.Saturday, 21 April 2012vovoတော်တော်ကြိုးစားထာတဲ့ဆိုဒ်လေးပါ...လန်းပါတယ်..ပိုမိုထွန်းတောက်နိုင်ပါစေဗျာ..Friday, 16 March 2012BewareofLuvDesktop gadget ကနေ သီချင်းတွေ နားထောင် မရတော့လို့ပါ..
ကူညီကြပါဦး...Thursday, 01 March 2012nyihtetmoeHappy Birthday MYMC...Thursday, 23 February 2012Corner StoneHappy Birthday MYMC...
DJ-ILLUSION please make another round to ROCK!Wednesday, 22 February 2012Aung Kyaw Moe Please Change Background Color; May You Be Happy,Healthy & Success In Life.Wednesday, 22 February 2012admin@justfree thank you for being such an awesome fan! I'm not really sure about that either but one thing I can advice is VLC player, can you install that on your touchpad? I'll also send you an email.Tuesday, 24 January 2012justfreei've beenahuge fan of MYMC for aboutayear. i listen to online streaming everyday. but how do i play streaming on hp touchpad? web player doesn't work and it shows error with internet radio (streaming app). any suggestion or solution would be appreciated. thanks.Tuesday, 24 January 2012မေမြို့မိုးကိုဇော်ပိုင်ဆိုထားတဲ့ အလွမ်းများစေသောဆူးကို တင်ပေးပါဦးအစ်ကိုရေ..။ ဘယ်မှာရှာရှာမရဘူး..။ ဂူဂဲလ်မှာလဲ မယ်လိုဒီဝေါက လူတစ်ယောက်ဆိုတာပဲတွေ့လို့ပါ..။Sunday, 18 December 2011ellenသီချင်းတပုဒ်လိုချင်ပါတယ် MYMC ရေ သီချင်းနာမည်လဲမသိ အဆိုတော်နာမည်လဲမသိပါဘူး
(ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူပျော်ဖို့ လမ်းခွဲကြပါစို့၊ ဆုံနိုင်ရန် လမ်းစမရှိတော့လို့ မျိုသိပ်ပြီး တို့နှစ်ယောက်ဝေးတော့မလို့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပျော်ဖို့ လမ်းခွဲကြပါစို့) အဲဒီသီချင်းစာသားတွေတော့ မှတ်မိနေပါတယ် အဲဒီသီချင်းဘယ်သူဆိုမှန်းမသိလို့ လိုက်ရှာရတာ ခေါင်းမူးနေပါပီချင် :D ပို့ပေးစေချင်ပါတယ် MYMC ကြီးရေFriday, 16 December 2011JohnyisAliveHello just singned up, thought i should say hi!Tuesday, 22 November 2011kyawswarKnowledge 101 အစီအစဉ်မှာ.. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို၇င်..steve jobs နဲ့ Mark Zuckerberg တို့ ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်. Knowledge101 အစီအစဉ်ကို တအားကြိုက်ပါတယ်.. ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေဗျာ.Wednesday, 09 November 2011AAKus VS them program မှာ အရင်က တင်ထားတဲ့ program ကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်လို့ရမလဲ သိချင်ပါတယ်Saturday, 05 November 2011JHON KHANကျနော်က mymc ကို စထောင်ထဲက အစဉ်တစိုက်အားပေးလဲာ့တာပါ
mymc က ချစ်သူများနေံစလုက်တော့ ကျနော် တောင်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေး လွင့်ပေးမယ် ဆိုလို့ ၁ ရက်လောက် မအိပ်ပဲ စောင့်ပြီး နားထောင်ခဲ့ရတာ
အမှတ်တရပါ။အဲဒိတုန်းက မြန်မာမှာ ကွန်နတ်ရှင်တွေ ကျနေတာလေ
mymc ဆတ်လကိချီတက်နှိင်ပါစေTuesday, 11 October 2011admin@need help You can record the stream with software but I wouldn't recommend it. Since we are only broadcasting with 56kbps (CD Quality), whatever you record would be that result. I would just ask the DJ on that particular time and help you out with that.
@xtetaung28 Video တွေက Youtube မှာကောတစ်ခြားနေရာတွေမှာကော တွေ့နေရလို့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်သေးတာပါ။ အသစ်တိုးချဲ့တဲ့အခါ ထည့်သွင်းဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပေးပါမယ်၊ကျေးဇူးပါ အခုလိုပြောပေးတဲ့အတွက်။
@malle Bruno Mars sounds great. We'll try to collect his songs and doaplaylist. Thanks for the suggestionSaturday, 24 September 2011malle.lovelyI want to listen the collection of Bruno Mars, if possible. Thanksalot! Enjoy MYMC :DThursday, 22 September 2011xtetaung28မြန်မာ အဆိုတော်တွေရဲ့ MTV တွေလိုတင်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျန်တာတွေတော့အကုန်ကောင်းပါတယ် interview တွေလည်းကြိုက်ပါတယ်
မြန်မာနိင်ငံက MTV တွေ ဒေါင်းလုပ် လုက်ခွင့်ပေးတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် တွေမတွေသေးလို့ပါThursday, 22 September 2011need help ! again ! how can I download the songs from radio ? I think the songs from radio are better then the songs from playlist :S It will be very very nice if you guys can tell me how I can download the songs from radio. Thanks ya ..Sunday, 18 September 2011myatnoezayချမ်းချမ်းရဲ့ရှိသည်ဖြစ်သည်၊ကိုကိုမောင်..နိုရာ.....မချစ်နဲ့တော့
ပို့ပေးနူင်မရ်ဆိုရင်......ကျေးဇူးအထူးပါလို့Friday, 26 August 2011khanshimy name is khanshi from the FAMILY ENTERTAINMENT GROUP . I have been producing Gameworms programme since 2011 January.
the program is all about the gaming and all gaming platforms... we are promoting the gaming society and gamers in
check us out on Fb and on5cartoons..
just want to introduce hereThursday, 25 August 2011ChoCannot register!! The sentence "Your registration is not welcome on this site" appears when I clicked register.. How to do??Tuesday, 23 August 2011ကျန်ချောင်းthat _______ is Good for The men of Question.Thursday, 18 August 2011@@Thanksabunch for taking time to reply my message, my dear admin. Never thought I would have got reply in suchashort time. Haveagood one.Thursday, 28 July 2011admin@@ - hey there, sure. We'll put that playlist back on the menu and available to listen once we finish relocating files to different server. Thank you for being supportive and the boost we need!Sunday, 24 July 2011@@Hello, MYMC. Thank you so much for your music and creation which keep my life upbeat. If you have time, could you plz check one of your playlists called Escape which is not accessible for me showing "404 - Article #262 not found". I would appreciate if you could find out and sort out that problem. Thanks again for song of the week which introduced me toaband, Bullet for my valentine. Cheers!Sunday, 24 July 2011EricMYMC က အကိုအမတို့ရေ .... register လုပ်လို့မရဘူးဗျ ... ကူညီပါဦး !!Wednesday, 15 June 2011nonohtetDo u know the original song of the Samsung galaxy S ringtones "You're my love song"? if anybody knows that song, please let me know.Monday, 13 June 2011linkerknowledge101 အစီအစဉ်ကိုအရမ်းသဘောကျပါတယ်
အသစ်မတွေ့လို့ပါFriday, 10 June 2011Patrickမင်္ဂလာပါ။
ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ Dj Guitar_O အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံစေချင်ပါတယ်။ သီချင်းများ တောင်းဆိုရာမှာ Reply လုပ်စေချင်ပါတယ်။ စကားပြောဆိုရာမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဖော်ဖော်ရွေရွေ ရှိစေချင်ပါတယ်။ အခုလို လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပြီး DJ of the Month ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့ အံ့သြမိပါရဲ့ဗျာ။Thursday, 09 June 2011^AnGeL^@Ms.Tin New Tun >> Thank you so much for your suggestion & help. Can you plz add angel@mymclub.net for further information. Thanks again.
@Yar Yar >> Can you plz send your IP address to angel@mymclub.net. Sorry for any inconvenience!
@R_Jan >> Although we dun put visitor stats in front-end, we hav those info in our back-end. If you wanna know abt those, feel free to let me know.. thanks in advance.
Sorry for my late reply... Thank u all.Monday, 30 May 2011R_Jancan you put in your site About which country have online now.you know i mean.somewebsite have how many online have now & which country with world map.
May be you can know about thisThursday, 19 May 2011Yar YarDear fri,
ကျနော် register လုပ်တာမရလို့ပါ။ Your registration is not welcome on this site! ဆိုတဲ့စာပေါ်လာပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်အဲလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။ thanks & regards,
Yar Yar.Tuesday, 10 May 2011red heartHi! I'm Phyu Phyu Kyaw Thein CRAZY! I cann't search Phyu Phyu' songs, how to search it ?
Thanks your web site....Monday, 09 May 2011tin nwe tuni am really interesting for education in Singapore. I studied Higher National Diploma in Travel and Tourism Management course in Athens , Greece at Swiss Business School.
I really like the Management course for Hospitality and Tourism and HND(Higher National Diploma) is recognized in all Europe, UK as well as Australia . I would like to discuss about the contemporary issue in Management Education in Greece. And also I would like to discuss about Myanmar Employee and employment law.
So please , I will be appreciate if you give me the chance to share the knowledge what i gain during 10 years of experiences for Myanmar people who plan or willing to study or work in Abroad. regards ,
ms Tin Nwe TunFriday, 06 May 2011^AnGeL^@freezeidiot: ဟုတ်ကဲ့။ update တွေကိုတော့ အားတာနဲ့တင်ပေးသွားမှာပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့ us VS them အစီအစဉ်ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတရ်။Monday, 02 May 2011freezeidiotupdate............တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးလား ခင်ဗျ...........
မျှော်နေပါတယ်ဗျာ............... reply ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်........(အားပေးလျက် ♥Luv mymc)Monday, 02 May 2011freezeidiotupdate............တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးလား ခင်ဗျ...........
မျှော်နေပါတယ်ဗျာ...............Monday, 02 May 2011Thant Thiri ChawI like MYMC.Tuesday, 26 April 2011Lonelymoon-radio မှာသီချ​င်းေ​တွချ​ည်း​ပဲ​ဆက်တိုက်လွှ​င့်​တာ​န့ဲ​စာ​ရ​င်... သီချ​င်း​တစ်ပုဒ်လွှ​င့်​ခါ​နီး​တို​င်း သီချ​င်း​နာ​မည်န့ဲ ဆို​တဲ့​သူနာ​မည်ကိုြေ​ပာြ​ပ​ရ​င် ပိုေ​ကာ​င်း​မယ်ထင်တ​ယ်.... (အဆ​င်ြေ​ပ​မယ်ဆို​ရ​င်ေ​ပါ့)
-ေ​နာ​က်ြ​ပီး... log in လုပ်ဖို့​.. register လုပ်ဖို့ေ​န​ရာ​ကို​လ​ည်း​ပိုြ​ပီး ထင်ထင်ရှား​ရှား​လုပ်ထား​ရ​င် ပိုေ​ကာ​င်း​မ​လား​ပဲ....
-ြ​ပီးေ​တာ့ တစ်လ​တာ​အတွ​င်း faviourate အြ​ဖစ်ဆုံး playlist လိုမျိုး​ဆို​ရင်လ​ည်း.. နားေ​ထာင်တဲ့​သူေ​တွ​အားေ​ပး​မယ်လို့​​ထင်ပါ​တ​ယ်...
-MYMC ရဲ့ေ​စ​တ​နာ​ကို​အသိ​အမှ​တ်ြ​ပုြ​ပီး အြ​မဲ​တ​မ်း​အားေ​ပးလျ​က်...
:)Friday, 22 April 2011^AnGeL^@အွန်လိုင်းဂျလေဘီ: အကိုအခုလို အကြံဥာဏ်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတရ်.
အခုလောလောဆယ် site က template ပုံစံပြောင်းပြီး code တွေ ပြင်နေတုန်းမို့ Current Song ကို ဖြုတ်ထားတာပါ။ မကြာခင်မှာ အဆင်ပြေတာနဲ့ ပြန်ထည့်ပေးပါ့မယ်။ စာအုပ်တွေတင်ပေးဖို့ကိုလည်း ညီမတို့ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် အမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပါနော်.. =)Friday, 15 April 2011အွန်လိုင်းဂျလေဘီအခုတလော ToolBar က Current Song on Radio မှာ သီချင်းနာမည်တွေကြည့်မရတော့ပါ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် လုပ်ပေးကြပါဦး
Song of the Day, Movie of the Week တို့လိုမျိုး
စာအုပ်ချစ်သူများအတွက်လည်း Book of the Week
upload တင်ထားပြီးသားရှိရင်လည်း လင့်ခ် လေးနဲ့တွဲပြီးဖြစ်ဖြစ်
တင်ထားပေးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်လေး တစ်ခုလောက်ကို
ထာဝရအားပေးလျက်..............Thursday, 14 April 2011mOe_princesscan u guys pls interview YELAY ?Sunday, 10 April 2011wiki-wikiI can't find anywhere 'SNARE Interview' on this website. Isn't it supposed to be under 'interview category'? Hasn't it uploaded yet on the website even though it's broadcast yesterday? Could you please tell me where can I find the interview? Thank you ^ ^ BTW, U GUYSSS ROCK !!!!! I really in love with this site!!!!!!Thursday, 07 April 2011psycho_ killer@KgLay: ညီ့ OS က 32 bit လား 64 bit လား? 64bit ဆိုရင် 64bit version ဇော်ဂျီ keyboard ရှိမှမြန်မာလိုရိုက်လို့ ရမယ်
@MYMC-lover: Please google and download "Windows media player plugin for firefox."Thursday, 31 March 2011MYMC-loverHi all,
Whenever I try to listen to mymc radio from the mymc home page, it said "missing plug in". I am trying it in both chrome and firefox 4. What plug in do I have to install to listen or any other things I should do to listen?
Please help! :)Monday, 28 March 2011Kaung Layအားလုံးမင်္ဂလာပါ. ကျနော် Windows7မှာ မြန်မာဖောင့်(zawgyi font) သုံးလို့ မရလို့ အခက်တွေ့ နေပါတယ်. သိရင် ကူညီပါ..Friday, 18 March 2011magicဒီဆိုဒ်လေးကိုအ၇မ်းသဘောကျပါတယ်.အွန်လိုင်းတက်တိုင်းလည်းနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းနားထောင်လို.မ၇တာများတယ် ကွန်မကောင်းတာလို.တော့ပြောတာပဲဒီအတွက်လည်းအ၇မ်းစိတ်ညစ်၇ပါတယ်But င်္ဒီဆိုဒ်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ချစ်သူကိုလည်းချစ်နေလျှက်ပါပဲ..Mymcကိုလည်းအားပေးလျှက်ပါပဲ.thz..alot..!Wednesday, 16 March 2011Nov Scorpion KingI am new visitor to This MYMC .
i like new songs and style of songs selection ;
Please Japanese songs ,want to listen ;pls upload .
Modernize MYMC ;.....:P:P:PSunday, 13 March 2011DekaytarEverytime ,i listen Radio.but if you say at radio, say more clearly..you say not clearly.I hear voice but not clearly.
Thanks for Radio.
Say more ClearlyTuesday, 08 March 2011၀ိုင်းThank you so much MYMC for Interview with REASONSunday, 06 March 2011၀ိုင်း2 Years Old M Y M C !! ^_^Thursday, 24 February 2011MR.PUNKMYMC ကအကိုအမများကနေ ၂နှစ်တိုင်တိုင်သီးချင်းချစ်သူးများအတွက် အချိန်ရသလိုရတိုင်း မနားရက်ဘဲ ကြိုးစားပန်းစား သီးချင်းတွေပြုစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်Wednesday, 23 February 2011၀ိုင်းHappy Birthday MYMC !! Wednesday, 23 February 2011LexiI'm not really sure where I'm supposed to post this so I'm posting this here, sorry if it'sawrong place D: Anyway, I just want to requesta"9mm" play list. It's really to find their songs to listen their songs since I don't havealot of Burmese friends. I looked through the playlists but I really didn'talot of their songs. So please, if you have time and if you don't mind, makea9mm play list. Thank you :DTuesday, 08 February 2011kwankhayသီချင်းများနားထောင်ပါရန်Thursday, 27 January 2011့hopeless13သီချင်းတော်တော်များများစုံပါတယ် ဆိုဒ်ကိုလည်းအရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေကြီးသီချင်းတွေ မတွေ့မိသလိုပဲနော် တစ်ချို့ ၀ါသနာရှင် တွေဆိုထားတဲ့ R&B သီင်္ချင်းတစ်ချို့ပါတင်ပေးရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။
ပီးတော့ တစ်ချို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ နောက်ခံ နဲ့ စာသားက အရောင်ဆင်နေသလိုဖြစ်တော့ အာရုံအရမ်းစိုက်ပီးဖတ်နေရတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အရောင်ထင်ထင်လေးတွေသုံးသင့်ပါတယ်။ MYMC က အစ်ကို အစ်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Tuesday, 04 January 2011ကိုထက်ဒီsite လေးကကောင်းလွန်းလို့ အချိန်တောင်လုနေရတယ် လုံးဝအချိန်မလောက်ဘူးဗျာ...။အရမ်းမိုက်တယ် ဒါတောင် သီချင်းပဲရှိသေး တစ်ခြားဟာတွေကို အချိန်သိပ့်မပေးနိုင်လို့ နည်းနည်းချင်းဆီပဲ ကြည့်ဖြစ်သေးတယ် နောက်မှ အများကြီးကြည့်တော့မယ် အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ဒီထက်ကောင်းတာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာWednesday, 10 November 2010ဇော်ထက်ထွန်းကျွှန်တော် ဒီနေ့ MYMC ကို ၀င်လာကြည့်မိတယ်။ တည်ဆောက်ထားတာ တော်တော်ကို ကောင်းပါတယ်။ အချိ်န်လဲ တော်တော်ပေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေလည်း သွားလည်ကြည့်တယ်။ ဒီနေရာလောက် အဆင်မပြေဘူး။ ကျွှန်တော်က အနောက်တိုင်းသီချင်းကို ပိုပြီးနားထောင်တာဆိုတော့ ဒီလို ခွဲခြားထားပြီး အရေအတွက် ကန့်သက်ထားတာကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။ ဒါလည်းဆွဲဆောင်မှု့ တမျိုးပဲလို့ထင်ပါတယ်။ :) ဒီနေရာကနေ ကိုယ်ကြိုက်သော သီချင်းများ တောင်းဆိုခွှင့်ရယင် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ အားပေးလျှက်......
သီချင်းကြိုက်သူ......Friday, 05 November 2010ye minpls send me msg how to add in g talk.
i try,but not success
tksSunday, 17 October 2010mr.punkPUNK သီချင်းများများ တင်ပေးပါဗျာ.........ရှိပြီးသားတွေလဲအရမ်းကောင်းတယ်...........MYMC ကိုအစဉ်အားပေးလျှက်ပါTuesday, 12 October 2010အွန်လိုင်းဂျလေဘီအမြဲတမ်း Playlist တွေကို download ဖြစ်ပါတယ်... ဘယ်တော့များ အသစ်တင်မလဲလို့ အမြဲမျှော်နေမိတယ်... မိန်းမနဲ့အဆင်ပြေပြီး Playlist တွေထပ်တင်နိုင်ပါစေ လို့လည်းဆုတောင်းလျှက် :D
Comment Origin: "မြန်မာ Rnb/Rap သီချင်းများ"Thursday, 23 September 2010Dreamerဆိုဒ်တွေအများကြီးဝင်ဖူးပါတယ် ဒါပေမဲ့... စနစ်တကျနဲ့သီချင်းတွေကိုတင်ပေးထားတဲ့ mymclub ကိုအရမ်းသဘောအကျဆုံးအကြိုက်ဆုံးပါပဲ... အရမ်းကောင်းပါတယ် နေ့တိုင်းလည်းနားထောင်ပါတယ်... ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်
(Comment Origin: "Best Popular Hits")Thursday, 23 September 2010MELINDAWanna advertise @ MYMC page? Can someone contact me?Friday, 03 September 2010crying_wolfဟီးဟီး "ဖော" ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖော သွားတာ မိတယ်ဗျ။ ကြွေသွားပြီ ဟီးဟီးဟီး တသက်မမေ့ဘူး ကိုခန့် ချောတဲ့ ဗျို့ !!!! ဟီးဟီးThursday, 02 September 2010ဖောဖောလေ ဒီ website ပေးတဲ့သူကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်
ကျေးဇူးတင်ခြင်းများစွာဖြင့်Thursday, 02 September 2010pawi can't download ချစ်သောမအတွက် song so i was unpleasant can u help me please
i do as you say step by step what's wrong i am not sure
Good luck byeThursday, 02 September 2010kaungchantharကျွန်တော်တို့ ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးကို ဒီဆိုက်ကနေလွှင့်ချင်ပါတယ်။အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
နည်းနည်းလောက် replyပြန်ပေးလို့ရမလား သိချင်ပါတယ်။Monday, 30 August 2010Yangonmoemymcradio2@mymclub.net တွင် Song request လုပ်ပါသော်လည်း Reply ပြန်မလုပ်ပါဘူး ခင်ဗျာ .. အဲဒါလေး ပြန်လည်ကြပ်မတ် ပေးစေလို ..
လေးစားစွာဖြင့်Thursday, 26 August 2010မူမုန်Knowledge101ကိုအင်မတန်မှကြိုက်ပါတယ်(တကယ်ကိုခိုက်မိတာပါဗျာ)။Amazing များကိုများမျာင်တင်ပေပါနော်။Ex-ဗာ(ဘာ)မြူလာတြိဂံတို.လာဟာမျိုး။ပြီးတော.Teach Talk ကိုလဲ ကြိုက်မိပါ၏ teach talk မှာ Mobile Phone နှင်.သက်ဆိုင်သောအရာများကိုများ၂ရေးပေပါနော်။ရေးသမျှကို Non-iPhone Stream လို step by step picture နှင့်တကွexplain ထားတာအင်မတန်မကောင်းလှပါတယ်(ကျွန်တော်လို မောင်ပိန်းများအတွက်)ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် mobile မှာ မြန်မာfont ဘယ်လို ထည်.တယ်ဆိုတာတင်စေလိုပါသည်။တခြား၂သောpage များလဲအင်းမတန်မှကောင်းပါတယ်ဗျာ။
Thank U for your time!Tuesday, 24 August 2010kiki9090US ka Dj chan lay kaayan pal myar par dal byoe!!! announce ko thay char ma lote pal innn' aeee' nae bar tway pyaw nay mhan lal ma thi woo.. ae DJ ko nal nal tha di pay lite par own ko mahuyar gyi yay.....Friday, 13 August 2010yumihaven't check MYMC site for quite awhile. DAYUMM. the new layout is awesome! lookin' good MYMC :) keep rockin' :)Tuesday, 20 July 2010saqootharဟုတ်ကဲ့ တကယ်ကြိူးစားထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လေးစားပါတယ်။ဖတ်ရှုသူတွေအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာများနဲ့ update ဖြစ်တဲ့ သတင်းများကို အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးစေလိုကြောင်း အကြံပြုပါတယ်။
စောဦးသာSunday, 18 July 2010ကိုရင်နော်လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်မှတ် နားဆင် အပန်းဖြေသွားပါတယ်..
ဆက်လက်တိုးတက် အောင်မြင်ပါစေ..Friday, 16 July 2010L.linnhello ! ရောခ့်အဆိုတော် လင်းလင်း ကိုအင်တာဗျူးပေးပါလား သူ့ ရဲ့ သီချင်းတွေက အရမ်းကို ခံစားလို့ ကောင်းလို့ ပါ.....
ဗျူးပေးပါနော် မျှော်လင့်လျက် MYMC cLUb ဒီထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေ...
L.linnTuesday, 13 July 2010မိူးထက်လင်းဆက် Big Bag ကို အင်တာ ဗျူး လုပ်ပေးပါ.... ကို ကျော်ထွဋ်ဆွေ ကို လဲ အင်တာ ဗျူး လုပ်ပေး ပါ... ဒီဆိုက် လေး ကို အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ်.... Online radio ကို လဲ download လုပ်ထားပါတယ်... သီချင်းတွေ လဲ အစုံလင် ရျှိတယ်နော်... ကြိုက်တယ်ဗျာ..... အမြဲအားပေးလျက်....
မိုးထက်လင်းဆက်Thursday, 08 July 2010ပိုးဥmember ၀င်ချင်တယ် ဘယ်က၀င်ရမလဲ.......ရှာနေတာ ခေါင်းတောင်မူးလာပြီ...Wednesday, 07 July 2010စိုင်းနေိာခမ်းverygoodTuesday, 06 July 2010Black InvaderHey man!I love all music tracks u uploaded , I still wanna listen more foreign lists.Can u help me please?Sunday, 04 July 201021kBig Bag ကို Interview လုပ်ပေးပါလားMonday, 28 June 2010မောင်အိုက်ပီးMy second love in here! :DSaturday, 26 June 2010CharmMy Second Life ^_^Friday, 25 June 2010Number1Princessin love with the new theme Wednesday, 23 June 2010Name * E-mail * Content * Image Verification * Display Num 510152050Powered by Phoca Guestbook
Tips - wall	Gadget
Gadget DownloadRadio ကို desktop ကနေ ဒီ gadget များ မှတဆင့်တိုက်ရိုက် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။	Song Mailသီချင်းတွေ ရှာမရရင် ခေါင်းမစားပါနဲ့ MYMC ကဘယ်လို ကူညီနိုင်လဲ ဒီမှာ လေ့လာကြည့်ပါ။	MYMC2Years ၂ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ မွေးနေ့ နဲ့ MYMC မူပိုင် Theme သီချင်း စာမျက်နာ သွားရောက်ရန်	Enter your email address:
Content View Hits : 8592559